Bọọlụ Nkata Basketball 800w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Bọọlụ Nkata Basketball 800w)
400W Egwuregwu Bọọlụ Nkata Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Ọkụ Egwuregwu N'èzí Ngwá ọkụ Mmiri ọkụ nke 130Lm / W! Ike nke oma, obere oriri. Mmiri ndị a na- agba n'èzí 400w nke 400 a nwere nsụgharị nsụgharị dị mma, okpomọkụ, na ịdị n'otu hụ na ndị na-eme egwuregwu nwere echiche doro anya na ubi. Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 400 nke anyị na- anwụ anwụ na-ekpo ọkụ...
Mmiri nke Mmiri Mmiri Ìhè Mmiri nke 800W maka Ụlọ Nkata
Ike nke ime ụlọ na-agba ume 800W nwere voltage voltage AC100 ~ 277V, mgbanwe dị ukwuu maka 2500W Halogen Bulb Kwesịrị ekwesị, chekwaa 80% na ọkụ eletrik ọkụ. Egwuregwu n'èzí n'èzí n'èzí bụ ogo 120. Ọkpụkpọ ọhụụ ọhụrụ nke na-ebute nnukwu ìhè na ọbụna ìhè, ruo 104000lm; akwa eletrik na-eme ka o doo anya na...
Ogige Bọọlụ Na-enwu Uhie Mmiri 400W na-enwu ọkụ na 400W
Ugwu anyị na-ekpuchi ugwu 400w Ubi Ubi Ubi arụ ọrụ nke na-egbukepụ ruo 98%. Na nnukwu ọkụ ọkụ na-acha ọcha ọkụ bulbs, a 400w Baseball Lighting Fixtures nwere ike na-egbuke egbuke nke aka 52000LM ma ọ bụ karịa. Ụlọ Egwuregwu Bọọlụ Nkata mma okpomọkụ dissipation arụmọrụ na nkwụsi ike nke oriọna si imewe nke ihe na...
1200W Na-enwu ọkụ maka Ụlọikpe Nkata
Nke a elu mmepụta 1200w N'èzí Bọọlụ Nkata n'Ụlọ nwere nwere lumen ọnụ ọgụgụ nke 156,000, na-abịa na ntuhie n'akuku nke 120 degrees. Ejiji ọkụ ndị a dị 1200w maka Ụlọ Egwuregwu Bọọlụ Nkata na-enwu gbaa 5700K ìhè maka n'èzí ụlọ ma ọ bụ ebe buru ibu ma ọ bụ kpuchie ụlọ nkwakọba ihe, yard, ụgbọala ma ọ bụ...
Ụlọ Nzukọ Bọọlụ Pụrụ Iche nke 800W Ejiri Ogige Arena 104000LM
Egwuregwu 800w Led Gym na-enwe oghere dị 120 Celsius na 104,000 Mmiri na-enwu gbaa (dị ka halogen 2500W), Chekwaa 50% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Nke a Nkata Court Ìhè na-mere nke elu-mmetụta weather eguzogide ihe onwunwe IP65, otú a Dugara Arena Ìhè nwere ike igbochi mmiri ozuzo, snow, ụkwụ na ihu igwe ọzọ. ihe karịrị...
A na-eji bọmbụ na-acha ọkụ na-arụ ọrụ maka windo na-eguzogide na-eguzogide na-eguzogide na-eguzogide na nchara, nke na-eme ka ìhè nke anyanwụ dị. ihe onwunwe siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya n'ubi gị na ebe ị na-adọba ụgbọala. Ejikọtara ya na 18V 60W panel nke dị na mbara igwe, tinye ebe ọkụ na- ere ọkụ na-...
Bọọlụ Nkata Basketball 800w Bọọlụ Nkata Basketball 800W Egwuregwu Bọọlụ Nkata Ụlọ Egwuregwu Bọọlụ Nkata Na-enwu Ụlọ Egwuregwu Bọọlụ Nkata Egwuregwu Basketball 500W Ighalo ọkụ bọọlụ LED 130lm / w 800w Ekekọtara edlọ Nkwakọba Led 150w